Simplicity Linux 16.04 iri pano | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeSimplicity Linux inotiunzira vhezheni itsva yeKernel pakati pedzimwe nhau dzakakosha
Iyo Simplicity Linux timu yekusimudzira yakazivisa izvozvo vhezheni itsva yeiyo inoshanda system yave kuwanikwaIyi ndiyo vhezheni itsva 16.04, inova inoteera vhezheni 16.01, yakabuda muna Kukadzi.
Iyi inoshanda system yakavakirwa pane iyo Lxpub inoshanda sisitimu, kugoverwa kwepasi-zviwanikwa kunosanganisira Puppy Linux ine Lxde desktop. Kutaura nezve Lxde, zviri nyore Linux zvakare inoshandisa iyo desktop sedesktop yayo huru.
Iyi inoshanda system Ini ndaizove ndaive ndiri pamusika kumberiZvisinei, paive nediki diki rekuchengetedza iro rakanonoka kuburitswa nemazuva mashoma Iyi sisitimu inoshanda inouya mumhando nhatu dzakasiyana, iyo Mini vhezheni (inonziwo Netbook), iyo X vhezheni uye iyo Desktop vhezheni.
Pakati pezvinhu zvitsva izvo Simplicity Linux 16.04 inounza isu tinofanirwa kushandisa Kernel 4.0.4 mune Mini uye Desktop shanduro uye Kernel 4.4.5 LTS.
Kana zviri zvirongwa izvo vhezheni yega yega inouya yakatangwa, isu tine iyo Mini vhezheni yeSimplicity Linux ninounza kwauri Adobe Flash Player, yazvino vhezheni yeMozilla Firefox uye nezvimwe zvishoma, nekuti ndosaka ichinzi Mini vhezheni. Kana iri yedesktop vhezheni, isu tine mamwe mashandisirwo akafanogadzirwa-akadai seGimp, Libre Hofisi, MPlayer kana Thunderbird, kunze kweizvo Mini vhezheni yacho inounza.
Sezvawakatoona, iyo Mini vhezheni inounza mabhesiki senge browser uye zvishoma zvimwe uye iyo Desktop vhezheni inounza zvese zvaunoda kushanda zvakajairika nekombuta.
Kana zvakadaro vhezheni X, inguva yekuyedza mairi ivo vari kupinda mukati nekuyedza zvinhu zvitsva, nekudaro, haina 100% kugadzikana uye haina kukurudzirwa kumatunhu ebudiriro, iri yega vhezheni, ngatitii.
Tinogona kudhawunirodha maBhaibheri ese nekuwana iyo webhusaiti ye Zvakareruka Linuxkubvira kurudyi tine chinongedzo chakananga kune iyo ISO mifananidzo yeimwe vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Simplicity Linux 16.04 iri pano
Linus Torvalds inotaura nezve mikana yeLinux